Isitudiyo esihle esinokubukwa kwe-Marina. - I-Airbnb
Isitudiyo esihle esinokubukwa kwe-Marina.
Yiba senhliziyweni yesenzo - kulesi situdiyo esithokomele e-Dubai Marina!
Izungezwe inqwaba yezindawo zokudlela ezimangalisayo, amakhefi kanye nemizuzu nje ukusuka obhishi - leli fulethi lilungele ukuhlala kwakho.
Izinsiza ezimangalisayo zifakwe njengechibi lokubhukuda, indawo yokuzivocavoca, amalineni/ amathawula ekhwalithi yehhotela, i-WiFi enesivinini esikhulu, i-cable TV, ikhofi/itiye nokunye!
Leli fulethi lilungele imibhangqwana, imindeni emincane, abangani, nabahambi bebhizinisi.
Sibheke ngabomvu ukukubamba e-Dubai!
Ngokushesha uzozwa ukunethezeka ukuthi leli fulethi linesikhathi lapho ungena efulethini. Umbhede olingana nendlovukazi ulungile ekhoneni elinamalineni amasha kanye nomatilasi onethezekile ukuze ulale kahle. Usofa uncike odongeni kumabonakude wekhebula.
Itafula lokudlela lihlala ezine ngaphesheya kwekhishi, eligcwele izinto zikagesi ezidingekayo ukuze uzipheke kalula noma nini uma uthanda.
Igumbi lokugezela linezinto ezidingekayo njengamathawula athambile, i-shampoo, i-conditioner, ijeli yeshawa, kanye ne-lotion yomzimba. Iphakethe lokwamukela elinekhofi, itiye, namanzi linikezwa lapho ufika ukuze uzizwe usekhaya.
I-Dubai Marina iyindawo ekahle yokuvakasha noma yebhizinisi. Ingenye yezindawo eziphambili eDubai lapho izivakashi zivame ukudlala khona ukuze zihlole izindawo eziningi ezizoba seDubai. Lokhu kwaziwa nange-JBR Beach, i-Dubai Marina Mall - egcwele imikhiqizo ewubukhazikhazi, uhambo lwe-yacht olusezingeni eliphezulu, kanye nempilo yasebusuku emangalisayo.
Le marina eyenziwe ngumuntu iyikhaya lemisebenzi eyahlukene izivakashi ezingayijabulela njengokuntweza esibhakabhakeni kanye ne-jet-skiing. I-Dubai Marina igcwele ukuzijabulisa, izinketho zokudlela, nezindawo zokungcebeleka.
Ngokukhetha okuningi okubekwe etafuleni i-Dubai Marina ukuze ujabulele, uzothola ukuthi ukuhlala lapha ukuze uthole iholide kuwumoya ohlanzekile.
Sawubona! Ngingu-Ivan futhi ngilapha ukuzokwamukela e-Dubai! Ngiphethe futhi ngiphethe i-Smart Concierge Holiday Homes futhi nginezinhlobonhlobo zezindlu kulo lonke elase-Dubai. Ithimba lami lezobudlelwane nezivakashi ezinokuhlangenwe nakho lizotholakala ubusuku nemini ukuze likusize nganoma yini oyidingayo nokwenza ukuhlala kwakho kube okukhumbulekayo!
Ngiyajabula ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezengeziwe ezifana nezokuthutha, ukugcinwa kwendlu nezinye izinsizakalo ze-concierge :)
Sawubona! Ngingu-Ivan futhi ngilapha ukuzokwamukela e-Dubai! Ngiphethe futhi ngiphethe i-Smart Concierge Holiday Homes futhi nginezinhlobonhlobo zezindlu kulo lonke elase-Dubai. It…
Le ndlu idinga u-$163 wemali ekhishwa uma isivakashi senze umonakalo. Izoqoqwa ngokwehlukana yisakhiwo ngaphambi kokufika kwakho noma lapho ungena.